Nzwisisa musiyano mutsva weCovid-19 -Omicron: Chenjerera kune yakakura midhiya inonakidza! – JucelinoLuz
Nzwisisa musiyano mutsva weCovid-19 -Omicron: Chenjerera kune yakakura midhiya inonakidza!
Publicado porJUCELINO NOBREGA DA LUZ 1 de dezembro de 2021 1 de dezembro de 2021 Publicado emSem categoria
Omicron: Nzwisisa musiyano mutsva weCovid-19 – Chenjerera kune yakakura midhiya inonakidza!
“Hutachiona chete huri kuuraya inhema …”
Pane munhu ari kureva nhema kuvanhu venyika here?
Águas de Lindoia, Mbudzi 25, 2021
Hope idzi dzinoratidza kuti rudzi urwu rutsva rutsva harupo, uye harugone kupfuudzwa zvakanyanya nekuti rine huwandu hwakawanda hwekuchinja, panguva imwe chete, rumwe rutivi runoratidza kufungirana kukuru (zviratidzo) zvekushandiswa kwefungu idzva iri, kumanikidza vanhu kuti vabaiwe – chavanonyanyoda kubayisa vanhu vasina chirwere – zvakaunza kushamisa kukuru muoperesheni modhi – sekureva kwetsamba yakanyorwa muna 2020, yaticharatidza pazasi. Nekudaro, iyo B.1.1.529 musiyano wekoronavirus, iyo yakawanikwa zvinoshamisa nevatsvagiri vekuSouth Africa, inouya panguva iyo mishandirapamwe yekudzivirira Covid-19 yakanga yava kutanga kubuda pasi rose, nekuratidzira kukuru nekuratidzira. uye kufa nekuda kwemhedzisiro yakacherechedzwa nenyanzvi dzakazvimiririra uye masayendisiti, kureva kuti, haina hukama nehurumende dzepasirese nezviremera, uye zvakare inopindirana nekunyepedzera kukuru kweiyo sensationalist media yekutanga kweiyo 5th wave yedenda mune akati wandei. Nyika dzeEurope. America neAsia.
Nzwisisa izvo masayendisiti anotoziva nezve iyi fomu nyowani yehutachiona … zvirinani, zvavanotaura – tinoremekedza, asi isu hatitendi.
Ko omicron variant inobva kupi?
“Nzvimbo huru yemitambo yakarongwa nevamwe vatongi nezviremera zvenyika kuti vakutongei uye kuti simba renyu rirambe riripo! “
Zita repamutemo remutsauko mutsva ndiB.1.1.529. Asi kufanana nemamwe marudzi (alpha, beta kana kuti delta), rakakurumidza kupiwa zita nebhii remabhii echiGiriki, nokudaro richizivikanwa munyika yose, mumaawa mashomanene chete, se“omicron” musiyano. Iro ndiro zita rinoshandiswa nezviremera uye nyanzvi dzakabatana nevatongi venyika.
Pane fungidziro huru yekuti vakuru vehurumende (chikamu chavo) vane mashare emarabhoritari makuru nekudaro vanoda kumanikidza vanhu kubaya majekiseni nemutengo wese. Uye chinangwa ndechevanhu vasina kubatika – munhu ane hutano angatapurira hutachiona sei? – Zvaisazova nyore kudzora vane utachiona!
Akakurumidza kusarudzwa neWorld Health Organization (WHO), zvakare akabatanidzwa mudambudziko guru iri rinobata vanhu vose.
Uye ivo vachaedza kutora mutoro wemhedzisiro yejekiseni uye vozotaura kuti dambudziko rakakonzerwa nemusiyano mutsva – saka, chenjerera mukutenda mune inonzwika media media uye mune vesainzi, vanachiremba, nyanzvi dzakabatana nezviremera izvi uye. hurumende dzenyika.
Hapana here mitsva mitsva, misiyano kana shanduko?
Iko hakuna anopfuura makumi matatu ekuchinja, sezvavanotaura, chinhu chakakosha kana chichienzaniswa nezvimwe zvine njodzi zvakasiyana.
Chechipiri, zviono zveprecognitive. hazvina kumboonekwa mu delta uye beta, asi vamwe havazivikanwi … uye isu hatizivi kuti kusanganiswa uku kwekuchinja kuchaita sei. Hutachiona hunouraya kusvika 0.13 muzana chete, kufa kunowedzerwa kuburikidza nevanhu vanofa kubva kune dzimwe nhoroondo dzechirwere uye kukonzeresa hutachiona – chenjera!
Variant inotumira nekukurumidza?
Kwete, kana isu tine hanya uye dzidzo yehutano – yeuka kuti hutachiona hwese hunoda muenzi. Uye inorarama mumhepo kwemaawa anokwana matatu.
Hapana chekuona. Majekiseni ari kutorwa neveruzhinji pasirese haashande uye achiri kukuvadza – kune zviuru zvezviitiko zvakavanzwa, nekuda kwemhedzisiro, yave kupararira zuva nezuva, pamusoro pezvose, mishonga yekudzivirira iyi ichiri yekuyedza uye yekukurumidzira. Vachazviisa kuburikidza nevezvenhau vemazuva ese kuti akasiyana anogona kuderedza kushanda kwejekiseni kusvika padanho risati ratemwa.
Zvakakomba kupfuura mafomu apfuura?
Ndiwo mumwe mubvunzo mukuru. Nzira inoshanda yekuisa kutya kwakanyanya muvanhu. Kunosuruvarisa sei kuti kuchine vanhu, mapofu chose chose, uye vanozvidavira! Kumhanya semombe kunotora iwo majekiseni ekuedza, echimbichimbi ane njodzi kuvanhu. Pasati papera vhiki kubva pakaonekwa musiyano, uye yakabhururuka ne supersonic jet uye ichakurumidza kupararira pasirese! Mwari wangu, hunyengeri hwakakwana? Kana paine chero musiyano, izvo zvandisingadaviri, (zvinoratidza kuti …) zviri kuparadzirwa nevanhu vanobhadharwa nemarabhoritari kana vamwe vakuru vakuru vehurumende vane hutsinye.
Mhosva idzi dzakangowedzera, nekuda kwezvikonzero zvisiri pamutemo uye mitemo yakagadzirwa navo, iyo inobvumira kukurumidza kuwedzera uye zvakare kubvumira vamwe vanofa kubva munhoroondo dzakasiyana kuti vanzi seCovid19 – uye kudzivirira kuferefetwa, mitumbi mizhinji inopiswa.
Kuno kuBrazil, hutachiona hwakangwara kwazvo, hunosvetuka mhemberero, hahutore vezvematongerwo enyika, kana zvimwe zviremera, hahukwiri mabhazi, zviteshi zvezvitima, uye zviteshi zvezvitima zvakazara vanhu, hahuende mumasarudzo uye kutora zororo paKisimusi. , Gore Idzva uye mumisangano, mapato akavanzika ezvematongerwo enyika uye zviremera. (pasina generalizing).
Ndinokukumbira nemutsa kuti ndikurumidze kupfuudza ruzivo urwu, ugovane neshamwari, vanhu vaunoda uye vaunoda – nekuti vanogara vachivharira chinongedzo, kana kuti: – “Usafe link” kudzivirira kuti isasvike kuvanhu vakanaka. (avo vachakuvadzwa). Mhosva kuvanhu! Zvichave zvinonyadzisa rimwe zuva!
Ndine urombo kune vaccinated, asi kana isati yashanda kusvika ikozvino, sei ichashanda munguva yemberi iri pedyo – zviremera zvose zvakatobvuma izvi, kuvanhu!
Iyi haisi mhosva, asi ruzivo rwakakosha. Hatina hukama hwezvematongerwo enyika nemunhu uye zvakanyanya zvinopesana nejekiseni – chero zviri zvechokwadi kune zvakanaka zvevanhu. Isu haticherechedzi kufamba kukuru uku kwejekiseni.
Dai Mwari vakuchengetei nekukuropafadzai mese!
Prof. Jucelino Luz – Munyori, muongorori, wezvemamiriro ekunze, muratidziri uye gwara remweya
歐米茄：了解 新冠肺炎 的新變種 – 謹防大媒體聳人聽聞！
හි නව ප්‍රභේදය තේරුම් ගන්න -omicron: Covid-19- විශාල මාධ්‍ය සංවේදනයන්ගෙන් පරිස්සම් වන්න!